UHovik Keuchkerian, umdlali weqonga, umlo wamanqindi wangaphambili, umbhali kunye nembongi. | Uncwadi lwangoku
Iincwadi zeHovik Keuchkerian
A IHovik keuchkerian (IBeirut, ngo-1972), ngaphandle kwegama layo elingenakubhengezwa, ngoku yaziwa njenge umdlali weqonga kunye nombhali wokuma. Kodwa abalandeli bezemidlalo baya kwazi kakuhle ukuba yayinguKeuchkerian imbethi manqindi I-elite, intshatsheli ye-heavyweight yaseSpain ngo-2003 nango-2004. Nangona kunjalo, lo nyana wotata waseArmenia kunye nomama waseSpain, naye umbhali kunye nembongi. Kwaye kufanelekile ukujongwa.
Umkhondo wakhe, ngokukhawuleza njengokuhluka, ugcwalisa nge impumelelo kunye nokudunyiswa. Kwaye uKeuchkerian umi kwindawo ebalulekileyo kwindawo ye- I-panorama yenkcubeko ayisiyesizwe kuphela, kodwa ikwangamazwe aphesheya. Kwabo kuthi banomdla othile wobukhulu bokuba ungathembi ukubonakala, sifumana kwi IHovik keuchkerian Umzekelo omkhulu. Umzimba oqaqambileyo kunye nomphefumlo wembongi. Umdibaniso ohlala utsala.
Iye yanetha kancinci ukusukela kwi-monologues kwi-Paramount Comedy, nangenxa yodumo lwayo ii-cocretas. Oku kuya kukhuthaza umboniso wakho weqonga Umngqibi onesihlangu somqhaphu, kwityala elinamaxesha amathathu kwiGran Vía yaseMadrid. Ikhe yanetha okokoko uSandro, e Hispania ilivo, apho ndiyifumene khona. Ukufefa ukubonakala ngaphakathi Ubulungiseleli bexesha o Isabel. Okwangoku unokubonwa kumdlalo bhanyabhanya, ebetha ubhedu kunye noMichael Fassbender okanye uJeremy Irons Isigqibo se-Assasins.
I-cinema, iibhulukhwe ezimfutshane, i-monologues, umabonwakude ... ye midlalo. Ngokuqinisekileyo Okwangoku ikwi Iingingqi zeCanal (kude kube nguJanuwari 29) umsebenzi we Wajdi Mowawad, nayo inemvelaphi yaseLebhanon, A howitzer entliziyweni, ukuba wayemele ngaphambili kwi-2014.
Ngokusekwe kwinoveli yokuqala kaMouawad, lo msebenzi libali lokwenzekayo kumlinganiswa ophambili ngobusuku obunye, ngexesha lokudluliselwa kwisibhedlele sikanina ogula ngumhlaza. Ngelo xesha, ophambili ukhumbula a Ukonwaba ebuntwaneni ukuba bebe kuye. Ikwathetha nge ilahleko, i ukubaleka eLebhanon ngenxa yemfazwe yamakhaya. Umbhali, kunye nomdlali weqonga, namava obomi afanayo, khupha yonke into intiyo nenzondo efumba.
Ngapha koko, akukho nto ibonakala imelana noHovik Keuchkerian. Ewe kunjalo literatura.
Kudliwanondlebe lwakutsha nje u-Keuchkerian waqaphela ngokuchanekileyo, kwaye ehleka, loo mbonakalo incinci imbongi ayinikiweyo. Kodwa kuyabonakala ukuba kudala ebhala kwaye sele enayo Iincwadi ezine ipapashiwe, eyokugqibela, incwadi yediski yemibhalo yakhe ayifundileyo kwaye ihamba nomculo.
Iileta ezivela ku-El Palmar yabhalwa kunxweme lwaseCadiz e-El Palmar de Vejer kwaye yiyo ngakumbi zakudala masithi ngokungqongqo ngokobume bayo kunye nomxholo.
impambano, nangona kunjalo, kunjalo ulingo ngakumbil kwifomathi. Imalunga nohambo lokuqonda kunye namaphupha ngemixholo yendalo iphela yokufa, ubomi, ulonwabo okanye ukubandezeleka.
Iminyaka emine kamva ipapasha Iidayari kunye nemingxunya, Ukudityaniswa kwezinye Imibongo eli-150, amabali amafutshane kunye namagama aphorisms ubukhulu becala, ezenza ezo dayari. Uyaqhubeka nokujonga imeko yomntu kwiitekisi ezixubayo kunye ne-distill Uburharha, ukuthamba, uburharha kunye nengqondo enkulu. Yincwadi kubonisiwe ngumculi uIrene Lorenzo.
Ngo-2014 wapapasha oko ukuza kuthi ga ngoku isihloko sakhe sokugqibela, Ukomelela kwakhona, loo albhamu-yealbham ebephawula ngayo nalapho aphinda amangaliswa yindlela yakhe ekhethekileyo yokuqonda uncwadi kunye nobomi. Ukomelela kwakhona meshes kancinci ngethoni kunye nenjongo ye Iidayari kunye nemingxunya. Kodwa kunesibongo ngakumbi kwaye ndiyabulela ngakumbi kumculo kaYuri Méndez. A Umsebenzi wemultimedia, incwadi enokumanyelwa okanye iCD enokufundwa. Umzekelo omtsha wokungafani kwezinto ezijikeleze izinto ezininzi.
Iileta ezivela ku-El Palmar (Umhleli weSinmar, 2005), ingqokelela yeklasi yemibongo.
impambano (I-Adeire, 2008), isincoko seprozi.
Iidayari kunye nemingxunya (Ndifunde, ngo-2012), amabali amafutshane ngamava akho.
Ukomelela kwakhona (Ndifunde / Lovemonk, 2014), ingqokelela yemibongo.
Unokufunyanwa kakuhle kangakanani ubuso obunomdla obuninzi yezinto eziguquguqukayo UHovik Keuchkerian.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Imibongo » UHovik Keuchkerian, umdlali weqonga, umlo wamanqindi wangaphambili, umbhali kunye nembongi.
"La Celestina", owona msebenzi ubalulekileyo wekhulu le-XNUMX
Iintsomi ezili-10 malunga nababhali eziyinyani (nobuxoki)